စာပေနျင့်ဆိုင်သော – Myitter
မိသားစုတစ်ခု အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးကို လုံးဝ ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ ယိုပေါက်ကြီး (၆) ခု မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတာကတော့ …. လောကမှာ စီးပွားရေးပျက်ရာ ၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ ယိုပေါက်ကြီး ၆ခုဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ဘယ်တော့မှ မတည်ဘူးတဲ့…မြန်မာတွေကတော့ ပြောကြတယ်“လူမိုက်နဲ့ငွေ” အတူမနေဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ပျောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားက ဘာကိုဟောသလဲဆိုရင် နံပါတ်(၁)က အာလသျ – […]
March 1, 2018 Myit Ter 0
“လက်မှတ်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ” လက်ထပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်လေးထဲမှာ လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေကြတယ်… “လက်မှတ်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ” လက်ထပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်လေးထဲမှာ လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေကြတယ်။ နှစ်ဖက်မိဘတွေဟာ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေ ဖြစ်ကြလို့ လက်ဖွဲ့တွေကလည်း […]
February 21, 2018 Myit Ter 0
အိမ်ထောင်တစ်ခု သာယာစေဖို့ “ခင်ပွန်းသည် ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့အရာ (၉) မျိုး ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်မှာ အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စဟာလည်း တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက် အများကြီးပိုနိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လင်ရယ်မယားရယ် ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ညှိတန်တာ ညှိ၊ တိုင်ပင်သင့်တာ တိုင်ပင်၊ ကူညီရိုင်းပင်းသင့်တာ ကူညီရိုင်းပင်းလို့ ချစ်စကို ရှည်စေသဘောနဲ့ […]
ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတုန်းက စကားလုံး ၅ လုံးပဲ ပြောခဲ့တယ်
February 5, 2018 Myit Ter 0
“မေတ္တာစစ်ဆိုတာ” ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတုန်းက စကားလုံး ၅ လုံးပဲ ပြောခဲ့တယ် ” ကို့ ကိုယုံကြည်ပါ” အိမ်ထောင်ကျပီး ကောင်မလေးက ကိုယ်ဝန်ရလာကာ သမီးလေးမွေးပေးတဲ့အခါကျတော့ ကောင်လေးက “ချစ် ပင်ပန်းသွားပီ”လို့ပြောပီး နှစ်သိမ့်ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့တယ်။ သမီးလေးအရွယ်ရောက်လာပီး အိမ်ထောင်ကျတော့လင် ယောက်ျားနောက် လိုက်သွားရတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပီးမျက်ရည်ကျနေတဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့ […]
ချမ်းသာဖို့ ဆိုရင် ဒါတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်
January 30, 2018 Myit Ter 0
ချမ်းသာဖို့ ဆိုရင် ဒါတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ် ငွေနောက်ကိုလိုက်ပါ။ ယနေ့ ခေတ်စီးပွားရေးအရဆိုရင် သမရိုးကျနည်းတွေနဲ့ ချမ်းသာဖို့ ကခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ ပထမဆုံးခြေလှမ်းကတော့သင့်ဝင်ငွေတိုးလာဖို့ အာရုံစိုက်ရမယ် ။ ငွေတွေထပ်ခါ ထပ်ခါဝင်နေဖို့ အာရုံစိုက်နေရမယ်။ ခုငွေနောက်ကိုစလိုက်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာ ငွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာသိလာပြီး အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြွားဝါပါနဲ့ ။ တိတ်တဆိတ်ကြိုးစားပါ သင်ရဲ့လုပ်ငန်း သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေက […]
ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းက ဘူလ်ဒါရွာလေးမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ကော်လိုရာဒိုနယ်မြေဟာ လှပတဲ့ ကျောက်တောင်ကြီးတွေရှိတာကြောင့် ရှုခင်းလှပလို့ နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။ ကျောက်တောင်တွေကြားမှာ စိမ်းလန်းပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ကြီးတွေ ရှိတယ်။ နွားစားကျက်လုပ်လို့ နေရာကောင်းလို့ အဲဒီမှာ ကျွဲတွေရော၊ နွားတွေရော တွေ့ရတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွဲအုပ်နဲ့ နွားအုပ်ကိုအတူတူ တွေ့ရတာ […]
January 26, 2018 Myit Ter 0
အားလုံးကိုဖတ်စေချင်သောအရမ်းကောင်းတဲ့စာစုလေး…. (၁) တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုအဖော်ပြုပေးသူမရှိတဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်းသီချင်းနားထောင်ပါ၊ စာဖတ်ပါ၊ စာရေးပါ။ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်။ (၂) တကယ်လို့ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ ထောင့်တစ်နေရာမှာဒါမှမဟုတ် စောင်ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ငိုလိုက်ပါ။တခြားလူရဲ့နှစ်သိမ့်မှုတွေမလိုပါဘူး။ငိုပြီးတာနဲ့ စိတ်တွေလန်းဆန်းလာလိမ့်မယ်။ (၃) စိတ်ထိခိုက်တဲ့အခါယုံကြည်ရတဲ့သူငယ်ချင်းကို ရင်ဖွင့်ပါ။တစ်ယောက်တည်း စိတ်ညစ်စရာတွေကိုရင်ထဲသိုဝှက်ထားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုပြီးစိတ်ထိခိုက်စေတယ်။ (၄) မပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ပြာကို မော်ကြည့်ပါ။ကြယ်တွေကို ရေတွက်ပါ။ အပြောကျယ်တဲ့ကောင်းကင်မှာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချစ်တစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။“ငါ […]
January 20, 2018 Myit Ter 0
ဖားတစ်ကောင်ဟာ ကင်းခြေများတစ်ကောင် လမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်တော့ ဒီလိုစဉ်းစားမိပါတယ် … “ငါ့မှာ ခြေနှစ်ချောင်း လက်နှစ်ဖက်ရှိတာတောင် လမ်းလျှောက်ရတာ ခက်ခဲတယ်… တစ်​ခါတစ်လေ ဘယ်ညာမှားပြီး ခြေလှမ်းတွေ လွဲနေတတ်သေးတယ်​.. ဒါပေမယ့် ဒီကောင်ကြီးက ခြေထောက်တွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတာ.. ဘယ်လိုများလမ်းလျှောက်သလဲမသိဘူး.. တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲ.. ဒီကင်းခြေများ ဒီခြေထောက်က အရင်လှမ်း ဟိုခြေထောက်က နောက်မှလမ်းဆိုပြီး […]
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုး လူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်နေလျက်နဲ့အယူသီး လွန်းနေရင်အတွေးအခေါ် နည်းရာ ရောက်တယ်။ လူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်နေလျက်နဲ့အတ္တတွေ ကြီး လွန်းနေရင် အသိဉာဏ်နည်းရာ ရောက်တယ်။ လူငယ် တစ်ဦး ဖြစ်နေလျက်နဲ့အာဃာတတွေ များလွန်းနေရင်သဘောထား မပြည့်ရာ ရောက်တယ်။ လူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်နေလျက်နဲ့ငါ့ကျမှ ကံဆိုးလေခြင်း ဆိုပြီးတညည်းညည်း တညူညူ အတွေးတွေနဲ့လက်လျှော့ အရှုံးပေးနေရင် […]
မနာလိုမှု ကဖြစ်တည်တဲ့ နာကျင်ကြေကွဲခြင်း
မနာလိုမှု ကဖြစ်တည်တဲ့ နာကျင်ကြေကွဲခြင်း တစ်ခါက သူဌေးသူကြွယ်ကြီးတစ်ဦးဟာ အရွယ်နှောင်းမှ သားတစ်ယောက်ရလာခဲ့တယ်။ အဲဒီသားဟာ မငိုတတ်ဘဲ ရယ်ပဲရယ်တတ်ပါတယ်။ သူကြွယ်ကြီးက ဒီကလေးဟာ သာမန်ကလေးတွေလိုပဲ တခြားဘာထူးခြားမှုမှမရှိဘူးဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်အောင် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး သားကိုငိုအောင်လုပ်ဖို့ အကြံထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက သူကြွယ်ကြီးရဲ့အိမ်ရှေ့ကနေ ဖြတ်ကြွသွားခဲ့ပါတယ်။ သူကြွယ်ကြီးက သားကိုပွေ့ချီပြီး […]